FANATANTERAHANA NY VELIRANO : Hanangana “Fondation” ny Filoha raha eken’ny Hcc
Anisany tena manan-danja ao anatin’ny velirano miisa 13 nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny fanomezana hasina ny zo maha olona. Mba hahafahan’ny Filoha manatanteraka ireo fampanantenana nataony dia manana fikasana hanangana « Fondation » ny tenany. 11 septembre 2019
Manoloana izany dia nisy ny taratasy mivantana nalefan’ny Filoham-pirenena eny anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana manontany ny hevitr’ireo mpahay lalàna ambony na mifanaraka na tsia amin’ireo andinin-dalàna mandrafitra ny Lalàm-panorenana io fikasany io.
Raha ny lalàna mantsy hatreto dia ny mampivady ny asan’ny Filoham-pirenena amina asam-panjakana hafa na fitantanana antoko politika, vondrona politika na fikambanana tsotra na ara-pivavahana no tsy azon’ny Filohan’ny Repoblika atao. Filoham-pirenena amina firenen-dehibe maro no efa nanangana ny « fondation » mba ho fandraisan’andraikitr’izy ireo amin’ny fampiroboroboana ny lafiny maha olona sy ny zon’olombelona, ny tontolo iainana sy ny lafiny fampianarana.
Ireo rehetra ireo dia mifanindra an-dalana amin’ny vinan’ny Filoham-pirenena Malagasy ka mahatonga azy hanangana « fondation » izay mbola hiandrasana ny fanapahan-kevitry ny Hcc hatreto.